प्रस्ताबित मनमोहन अस्पतालले गर्भमै मर्नुपर्ने के अपराध गर्‍यो कमरेड ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
सारा एमालेजन र सम्पुर्ण देशबाशीले तपाँईबाट थाहा पाउन पाए भबिश्यमा अरु निर्दोष लगानी कर्ताले नयाँ सीता बन्नु पर्ने थिएन कि ? कमरेडहरुको पार्टीले स्वीकार गरेको आर्थिक पद्धती अनुसार हिजोका पुँजीबादीहरु नयाँ समाजबादी चेलामा रुपान्तरण हुँदै रामराज्य निर्माणको आधार मनमोहन अस्पतालको मृत्युसंगै सुरु गरिने हो त ? गोहीको आँसु झारेर लोकप्रिय बन्ने गगन पथमा सवार हुने तपाँईको बाध्यता भाबनात्मक हो कि सैद्धान्तिक हो ? यीनै अहम सवालको जवाफ कुरीरहेका लगानी कर्ताको चित्त बुझाई दिनु भए कमरेडलाई साधुबाद ।